JỌN 6 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (JỌN 6)
Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jisọs banyere ụgbọ mmiri gafee nꞌakụkụ nke ọzọ nke osimiri Galili. Aha ọzọ a na-akpọ osimiri Galili bụ osimiri Taịberias.
Igwe mmadụ dị ukwuu sooro ya, nꞌihi na ha hụrụ ọrụ ebube ọ na-arụ hụkwa otu o si agwọ ndị ọrịa.
Nꞌihi nke a Jisọs rigoro nꞌelu ugwu nọdụ ala. Ndị na-eso ụzọ ya bịakwara nọrọ ya gburugburu.
Nꞌoge ihe ndị a na-eme mmemme oriri Ngabiga ndị Juu dị nso.
Mgbe Jisọs leliri anya ya elu hụ igwe mmadụ dị ukwuu na-abịakwute ya ọ jụrụ Filip ajụjụ sị, “Ebee ka anyị ga-azụta nri ga-ezu ndị a?”
Jisọs chọrọ ịmata ihe Filip ga-ekwu, nꞌihi na ọ maara ihe ọ na-ezube ime.
Filip zara ya sị, “Olee otu nke a ga-esi mee? Ọ ga-efu ego dị ukwuu ịzụta nri nke onye ọ bụla nꞌime ha ga-eritụ nanị nri ntakịrị.”
Anduru nwanne Saịmọn Pita tinyere ọnụ ya gwa Jisọs okwu sị,
“Otu nwantakịrị nwoke nọ nꞌebe a. O nwere ogbe beredi ise na azụ abụọ. Ma gịnị ka a ga-eji nke a mee nꞌebe igwe mmadụ ha otu a dị?”
Jisọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu sị, “Gwanụ onye ọ bụla ka ọ nọdụ ala.” Ahịhịa juru nꞌebe ahụ. Ndị a nile nọdụrụ ala. Ha dị puku mmadụ ise!
Jisọs weere beredi ndị a kelee Chineke ekele nꞌihi ha. O nyere ha ndị na-eso ụzọ ya ka ha kee igwe mmadụ ahụ. Jisọs natakwara azụ abụọ ahụ nyekwa Chineke ekele nꞌihi ha. Ndị na-eso ụzọ ya kekwara igwe mmadụ ndị a azụ ahụ.
Ndị na-eso ụzọ ya tụtụkọtara ihe fọdụrụ. O juru nkata iri na abụọ.
Mgbe ndị mmadụ a hụrụ ihe ebube a Jisọs mere, ha sịrị, “Nꞌezie, nwoke a bụ onye amụma ahụ anyị naele anya ya!”
Ma Jisọs matara ihe ha chọrọ ime. Ọ maara na ha chọrọ ijide ya mee ya eze ha nꞌike. Ọ hapụrụ ha gamie nꞌelu ugwu ahụ nanị ya.
Nꞌanyasị ụbọchị ahụ, ndị na-eso ụzọ ya sitere nꞌebe ahụ pụọ gaa nꞌọnụ mmiri,
ebe ha banyere nꞌụgbọ mmiri malite ịga nꞌọbodo Kapanọm, nke dị nꞌofe ọzọ nke osimiri Jọdan. Nꞌoge a ọchịchịrị ebidola ịgba, ma Jisọs alọghachikwutebeghị ha.
Ọ dịghị anya mgbe ha banyesịrị nꞌụgbọ, oke ifufe bidoro ife.
Mgbe ha nyaara ụgbọ mmiri ahụ na-aga, nꞌihe dị ka kilomita anọ ma ọ bụ ise site nꞌọnụ mmiri, ha lepụrụ anya hụ Jisọs ka ọ na-aga ije nꞌelu mmiri na-abịakwute ụgbọ ahụ ha nọ nꞌime ya. Oke egwu tụrụ ha!
Ma Jisọs kpọrọ ha sị, “Unu atụla egwu. Ọ bụ m!”
Ngwangwa ha kpọbatara ya nꞌime ụgbọ ahụ. Ọ dịkwaghị anya ha eruo ebe ha na-aga.
Nꞌụtụtụ echi ya, igwe mmadụ zukọtara nꞌakụkụ mmiri ahụ Jisọs nọ nye ha nri. Ha chere na ha ga-ahụ Jisọs, nꞌihi na o soghị ndị na-eso ụzọ ya baa nꞌụgbọ mgbe ha bara nꞌụgbọ mmiri ụnyaahụ.
Ọtụtụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ si Taịberias bịaruo ebe ahụ Onyenwe anyị nọ nye igwe mmadụ ahụ nri.
Ma mgbe ndị a na-ahụghị Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya, ha banyere ụgbọ mmiri ọzọ kwọfee osimiri ahụ na-aga Kapanọm ịchọ Jisọs.
Mgbe ha bịaruru Kapanọm, ha hụrụ Jisọs sị ya, “Nna anyị ukwu, olee ụzọ i si bịa nꞌebe a?”
Jisọs zara sị ha, “Unu na-achọ m nꞌihi na m nyere unu nri, ọ bụghị nꞌihi na unu kweere na m.
Ha zara ya sị, “Gịnị ka anyị ga-eme nke ga-egosi na anyị na-arụ ọrụ Chineke?”
Jisọs zara sị ha, “Ọ bụ otu ihe nanị, nke a bụkwa uche Chineke. Kwerenụ nꞌọnye ahụ Chineke zitere.”
Ha zara sị ya, “Olee ihe ịrịba ama ị ga-egosi anyị nke ga-eme ka anyị kwere na gị? Gịnị ka ị ga-eme?
Jisọs sịrị ha, “Ọ bụghị Mosisi nyere ha nri ahụ. Ọ bụ Nna m. Ugbu a Nna m na-enye unu ezi nri ahụ si nꞌelu bịa.
Ezi nri a bụ Onye ahụ Chineke si nꞌelu zite. Ọ na-enye ụwa ndụ.”
Ha zara sị ya, “Onyenwe anyị, biko nye anyị nri a ụbọchị nile.”
Jisọs zaghachiri ha sị, “Abụ m nri na-enye ndụ. Onye ọ bụla na-abịakwute m agụụ agaghị agụkwa ya ọzọ. Akpịrị agaghị akpọkwa ndị nile kweere na m nkụ.
Dị ka m gwara unu, unu ahụla m ma unu ekweghị.
Nꞌihi na esi m nꞌelu bịa nꞌụwa. Abịara m ime uche Chineke onye zitere m, ọ bụghị ime uche nke aka m.
Ndị Juu bidoro ịtamụ ntamụ megide ya nꞌihi na ọ sịrị na ya bụ nri ahụ si nꞌelu bịa.
Ha sịrịtara onwe ha, “Ònye a ọ bụghị Jisọs nwa Josef? Ọ̀ bụ na anyị amaghị nne ya na nna ya? Gịnị ka ọ na-ekwu, na o si nꞌelu bịa?”
E dere ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, ‘A ga-akụziri mmadụ nile ihe banyere Chineke.’ Onye ọ bụla Chineke gwara okwu, nke mụtakwara eziokwu ahụ site nꞌaka Chineke ga-abịakwute m.
Nke a apụtaghị na onye ọ bụla ahụla Nna m anya. Ọ bụ nanị m hụrụ ya, nꞌihi na ọ bụ site nꞌebe ọ nọ ka m si bịa.
Nꞌezie abụ m nri na-enye ndụ.
Nna nna unu ha riri mana, nri ahụ pụrụ iche Chineke nyere ha nꞌime ọzara, ma ha mesịrị nwụọ.
Ma nri a, nke si nꞌelu bịa, na-enye onye ọ bụla na-eri ya ndụ ebighị ebi.
Ndị Juu rụrịtara ụka nꞌetiti onwe ha na-asị, “Olee otu nwoke a ga-esi nye anyị anụ ahụ ya ka anyị taa?”
Ma Jisọs zara sị ha, “Nꞌezie asị m unu, ọ bụrụ na unu erighị anụ ahụ, ṅụọkwa ọbara m, unu agaghị enwe ndụ ebighị ebi.
Anụ ahụ m bụ ezi nri ahụ. Ọbara m bụkwa ezi ihe ọṅụṅụ.
Onye ọ bụla na-eri anụ ahụ, ma na-aṅụkwa ọbara m ga-anọgide nꞌime m. Mụ onwe m gaanọkwa nꞌime ya.
Ana m adị ndụ site nꞌike Nna dị ndụ, onye zitere m. Otu aka ahụ, ndị nile na-eri anụ ahụ m ga-adịkwa ndụ site nꞌike nke m gaenye ha.
Abụ m ezi nri ahụ si nꞌelu bịa. Nri a abụghị ụdị nke nna nna unu ha riri nwụọ. Onye ọ bụla na-eri nri a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.”
Ọtụtụ ndị na-eso ya bụ ndị gere ntị nꞌokwu ndị a kwuru sị, “Okwu ndị a siri ike ịghọta. Ònye nwere ike ịkọwa ihe ha pụtara?”
Ma ụfọdụ nꞌime unu ekwenyeghị.” Nꞌihi na Jisọs maara site na mmalite ndị ahụ na-ekwereghị. Ọ matakwara onye ahụ ga-arara ya nye.
Ya mere ọ gwakwara ha okwu sị, “Ọ bụ nke a mere m ji gwa unu okwu sị, ọ dịghị onye ọ bụla ga-abịakwute m ma ọ bụghị na Nna m mere ka ọ bịakwute m.”
Ma Jisọs tụgharịrị jụọ mmadụ iri na abụọ ahụ ọ họpụtara ajụjụ sị ha, “Ùnu chọkwara ịlaghachi azụ dị ka ndị ọzọ mere?”
Saịmọn Pita zara sị, “Onyenwe anyị, ònye ka anyị ga-alakwuru? Ọ bụ nanị nꞌaka gị ka okwu ahụ na-enye ndụ ebighị ebi dị.
Anyị kweere okwu gị, marakwa na ị bụ Onye Nsọ ahụ Chineke zitere.”
Mgbe ahụ Jisọs gwara ha sị, “Unu dị ndị ozi iri na abụọ m họpụtara, ma nꞌime unu e nwere otu onye bụ nwa ekwensu!”
Jisọs na-ekwu ihe banyere Judas nwa Iskarịọt onye ahụ ga-arara ya nye nꞌaka ndị ga-egbu ya.